ကခငျြဆရာမ ၂ ဦး အဓမ်မပွုကငျြ့ အသတျခံရခွငျး အမှုမှနျပျေါပေါကျရေး ကွိုးပမျးနဆေဲ - Kachin News Group (KNG) ,
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး မူဆယျခရိုငျ ပနျဆိုငျး(ကွူကုတျ) ကောငျးခါးကြေးရှာတှငျ အုပျစုဖှဲ့ အဓမ်မပွုကငျြ့သတျဖွတျခံရသော ကခငျြ KBC စတေနာ့ဝနျထမျး ကြောငျးဆရာမ ၂ ဦးအမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး အမှုမှနျပျေါပေါကျရေးစုံစမျးရေးအဖှဲ့ကို ဖကျြသိမျးခွငျးမရှိဘဲ စုံစမျးနဆေဲဖွဈကွောငျး သိရပါသညျ။
အသကျ ၂၀ ဝနျးကငျြ ဆရာမ Maran Lu Ra နှငျ့ ဆရာမ Tangbau Hkawng Nan Tsin တို့ ၂ ဦးသညျ ၂၀၁၅ ဇနျနဝါရီ (၁၉)ရကျနညေ့ ရကျရကျစကျစကျ အဓမ်မပွုကငျြ့သတျဖွတျခံရခဲ့သျောလညျး ယနေ့ (၅)နှဈပွညျ့လာခြိနျထိ တရားမြှတမှု မရရှိသေးပေ။
“ဆရာမ ၂ ဦးအမှုဟာ ရပျသှားသလိုဖွဈပမေယျ့ အတှငျးပိုငျးမှာတော့ ကနြျောတို့ မရပျသေးပါဘူး။ ရှနေ့တှေနေဲ့ အလုပျလုပျနဆေဲ ဖွဈတယျ။ တဈနမှေ့ာ ကနြျောတို့ဘကျ သကျသအေထောကျအထားခိုငျလုံရငျ အရေးယူမှုတှေ လုပျသှားမှာဖွဈတယျ” ဟု အမှုမှနျပျေါပေါကျရေးခေါငျးဆောငျဖွဈသူ ယခု ကခငျြနှဈခွငျးခရဈယာနျအဖှဲ့ခြုပျ (KBC) ဥက်ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson ပွောပါသညျ။
အမှုမှနျပျေါပေါကျရေးကွိုးစားရာတှငျ သံသယဖွဈခံရသော တပျမတျော ခမရ (၅၀၃) စဈကွောငျးမှူးနှငျ့တကှ တပျမတျောသားမြားကို ကိုယျတိုငျစဈမေးရနျ KBC အမှုမှနျပျေါပေါကျရေးအဖှဲ့က ကွိုးစားခဲ့သျောလညျး လားရှိုးခရိုငျတရားရုံးမှ လကျမခံခဲ့သညျ့အတှကျ ရပျတနျ့နဆေဲဖွဈသညျဟု သိရပါသညျ။
ဆရာမ ၂ ဦး အမှု တဈနှဈပွညျ့ခြိနျ ကခငျြအမြိုးသမီးအစညျးအရုံး ထိုငျးနိုငျငံ KWAT မှ ဖွဈစဉျကို အသေးစိတျလလေ့ာပွီး ဥပဒအေရလလေ့ာသုံးသပျထားသညျ့ ‘Justice Delay, Justice Denied’ ဆိုသညျ့ အစီရငျခံစာတှငျ ပွဈမှုကြူးလှနျသူမှ ထိုအခြိနျ ကြေးရှာတှငျ ရှိနသေော မွနျမာ့တပျမတျောဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။
“အခငျးဖွဈပှားတဲ့အခြိနျ သှေး၊ အမြိုးသမီးအဂါင်္ံကို စဈဒါတှေ ၊ ဆံပငျတှစေဈလို့ရတယျ အစိုးရကနေ DNA တို့ကို စဈတဲ့အခြိနျမှာ အဖွမေထှကျလာဘူး။ အဖွမှေနျက ဆေးရုံမှာပဲရှိမယျလို့ ကမြတို့ ထငျတယျ။ အမှုမှနျ ပျေါပေါကျဖို့ မြှျောလငျ့တယျ” ဟု ကခငျြအမြိုးသမီးအစညျးအရုံးထိုငျးနိုငျငံ Kachin Women’s Association of Thailand မှ တှဲဖကျ အတှငျးရေးမှူး ဒျေါ San Htoi ပွောပါသညျ။
ကခငျြပွညျနယျအတှငျး ၂၀၁၁ တဈကြော့ပွနျတိုကျပှဲမြားပွနျလညျဖွဈပျေါလာခြိနျ အမြိုးသမီးမြားပျေါ လိငျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှုနှငျ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုမြား ပိုမိုမြားဖွဈပှားခဲ့ပွီး တရားမြှတမှု တဈခုမှ မရခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျဆိုထားသညျ။
ဆရာမ ၂ ဦးအသတျခံရသညျ့ဖွဈစဉျ အမှုမှနျမပျေါပေါကျသေးသညျ့အတှကျ နှဈစဉျ ဇနျနဝါရီ (၁၉) ရကျနေ့ ရောကျတိုငျး ဆုတောငျးပှဲဖွငျ့သာ အဆုံးသတျခဲ့ရသညျမှာ (၄)နှဈ ရှိခဲ့ပွီဖွဈပါသညျ။
တရားမြှတမှုကို မဖျောဆောငျနိုငျသေးသောကွောငျ့ ဆရာမ ၂ ဦး၏ မိသားစုကိုလညျး ဆကျသှယျအကွောငျးကွားရနျ အဖွမေရှိသေးဟု Rev. Dr. Hkalam Samson ပွောပါသညျ။
“တရားရုံးမှာ ကနြျောတို့ တရားလို၊ တရားခံ ဆိုပွီး ဒီနအေ့ထိတရားစှဲလို့မရသေးဘူး။ ကနြျောတို့မှာ ဘာမှ မပွညျ့စုံသေးဘူး အခကျြအလကျတှအေားလုံးက ရဲလကျထဲမှာဆိုတော့ ဒီအတောအတှငျးတော့ ကနြျောတို့ မေးခငျြတာမေးနတေဲ့ အပိုငျးပဲရှိနတေယျ။ အမှုနဲ့ပကျသကျပွီး ထူးခွားမှုမရှိသေးလို့ အိမျသားတှကေိုလညျး ပွနျပွောဖို့ စကားမရှိသေးဘူး” ဟု ပွောဆိုထားသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ (၅)နှဈ Kawnghka (ကောငျးခါး)ကြေးရှာ၏ ညသနျးခေါငျအခြိနျတှငျ အုပျစုလိုကျ ရကျရကျစကျစကျ အဓမ်မပွုကငျြ့သတျဖွတျခံခဲ့ရသော ဆရာမ ၂ ဦးအမှု ကြူးလှနျသူမြားကို အရေးမယူနိုငျသေးသဖွငျ့၊ ဆရာမ ၂ ဦးအတှကျ တရားမြှမှု ရရှိရေး Kawnghka ကြေးရှာနှငျ့ မွဈကွီးနား Jaw Bum စသညျ့နရော နှဈနရောတှငျ ဆုတောငျးပှဲဖွငျ့သာ ပွုလုပျရနျ စီစဉျနကွေောငျး KBC မှ သိရသညျ။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) ကောင်းခါးကျေးရွာတွင် အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခံရသော ကချင် KBC စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျောင်းဆရာမ ၂ ဦးအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲ စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ဆရာမ Maran Lu Ra နှင့် ဆရာမ Tangbau Hkawng Nan Tsin တို့ ၂ ဦးသည် ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ (၁၉)ရက်နေ့ည ရက်ရက်စက်စက် အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခံရခဲ့သော်လည်း ယနေ့ (၅)နှစ်ပြည့်လာချိန်ထိ တရားမျှတမှု မရရှိသေးပေ။
“ဆရာမ ၂ ဦးအမှုဟာ ရပ်သွားသလိုဖြစ်ပေမယ့် အတွင်းပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ မရပ်သေးပါဘူး။ ရှေ့နေတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့မှာ ကျနော်တို့ဘက် သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံရင် အရေးယူမှုတွေ လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်” ဟု အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ယခု ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ဥက္ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson ပြောပါသည်။
အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကြိုးစားရာတွင် သံသယဖြစ်ခံရသော တပ်မတော် ခမရ (၅၀၃) စစ်ကြောင်းမှူးနှင့်တကွ တပ်မတော်သားများကို ကိုယ်တိုင်စစ်မေးရန် KBC အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအဖွဲ့က ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း လားရှိုးခရိုင်တရားရုံးမှ လက်မခံခဲ့သည့်အတွက် ရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။
ဆရာမ ၂ ဦး အမှု တစ်နှစ်ပြည့်ချိန် ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး ထိုင်းနိုင်ငံ KWAT မှ ဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ်လေ့လာပြီး ဥပဒေအရလေ့လာသုံးသပ်ထားသည့် ‘Justice Delay, Justice Denied’ ဆိုသည့် အစီရင်ခံစာတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှ ထိုအချိန် ကျေးရွာတွင် ရှိနေသော မြန်မာ့တပ်မတော်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
“အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အချိန် သွေး၊ အမျိုးသမီးအဂါင်္ံကို စစ်ဒါတွေ ၊ ဆံပင်တွေစစ်လို့ရတယ် အစိုးရကနေ DNA တို့ကို စစ်တဲ့အချိန်မှာ အဖြေမထွက်လာဘူး။ အဖြေမှန်က ဆေးရုံမှာပဲရှိမယ်လို့ ကျမတို့ ထင်တယ်။ အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်” ဟု ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးထိုင်းနိုင်ငံ Kachin Women’s Association of Thailand မှ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဒေါ် San Htoi ပြောပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၁ တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာချိန် အမျိုးသမီးများပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ပိုမိုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရားမျှတမှု တစ်ခုမှ မရခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ဆိုထားသည်။
ဆရာမ ၂ ဦးအသတ်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ် အမှုမှန်မပေါ်ပေါက်သေးသည့်အတွက် နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီ (၁၉) ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ဆုတောင်းပွဲဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရသည်မှာ (၄)နှစ် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
တရားမျှတမှုကို မဖော်ဆောင်နိုင်သေးသောကြောင့် ဆရာမ ၂ ဦး၏ မိသားစုကိုလည်း ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရန် အဖြေမရှိသေးဟု Rev. Dr. Hkalam Samson ပြောပါသည်။
“တရားရုံးမှာ ကျနော်တို့ တရားလို၊ တရားခံ ဆိုပြီး ဒီနေ့အထိတရားစွဲလို့မရသေးဘူး။ ကျနော်တို့မှာ ဘာမှ မပြည့်စုံသေးဘူး အချက်အလက်တွေအားလုံးက ရဲလက်ထဲမှာဆိုတော့ ဒီအတောအတွင်းတော့ ကျနော်တို့ မေးချင်တာမေးနေတဲ့ အပိုင်းပဲရှိနေတယ်။ အမှုနဲ့ပက်သက်ပြီး ထူးခြားမှုမရှိသေးလို့ အိမ်သားတွေကိုလည်း ပြန်ပြောဖို့ စကားမရှိသေးဘူး” ဟု ပြောဆိုထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ် Kawnghka (ကောင်းခါး)ကျေးရွာ၏ ညသန်းခေါင်အချိန်တွင် အုပ်စုလိုက် ရက်ရက်စက်စက် အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသော ဆရာမ ၂ ဦးအမှု ကျူးလွန်သူများကို အရေးမယူနိုင်သေးသဖြင့်၊ ဆရာမ ၂ ဦးအတွက် တရားမျှမှု ရရှိရေး Kawnghka ကျေးရွာနှင့် မြစ်ကြီးနား Jaw Bum စသည့်နေရာ နှစ်နေရာတွင် ဆုတောင်းပွဲဖြင့်သာ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း KBC မှ သိရသည်။